Abaningi bethu baphupha ngezinga elingavamile ekamelweni lokulala. Ngenhlanhla, kunezindlela eziningi ezahlukene zokwenza iphupho lakho ligcwaliseke. Omunye wabo umbhede omine we-poster. Ngakho-ke yini i-canopy - umkhuba wefashini noma i-anachronism, ifomu elihle noma ukuklama ngobuciko? Sizozama ukuphendula le mibuzo ngokusebenzisa lesi sihloko.
Uma sizwa igama elithi "idonga", emcabangweni wethu kukhona izindlu zasebukhosini ezithokozisayo, noma okungenani izindlu zokulala ezimele kakhulu nezinduna ezihloniphekile zama-elite, kanye namakamelo amancane empumalanga.
Ezikhathini zasendulo, umbhede wamanzi wawungenzi nje umsebenzi wokuhlobisa. Yebo, umcibisholo uvinjelwe embhedeni ovela ezweni langaphandle ngosizo lwekhabethe noma i-curtain elula, kodwa ngesikhathi esifanayo, waletha izinzuzo ezingenakuphika. Emakamelweni avulekile ayenamapulangwe aphezulu kakhulu, kungakhathaliseki ukuthi ayengacasuli kahle kangakanani, kodwa ngemuva komgwaqo kwakuyi-cozier kakhulu futhi efudumele. Ngaphezu kwalokho, ngosizo lombhoshongo, kwakungenzeka ukudala imingcele yendawo yangasese "ebuseduze" yabanikazi abahloniphekile benqaba. Phela, ihholo elikhulu lalivame ukukhonza njengekamelo lokulala, lapho zonke izinceku zalala ndawonye namakhosi abo.
Sonke siyazi ukuthi i-East lasendulo yindawo yokuzalwa kuyo. Kuleli zwe i-canopy phezu kombhede isetshenziswe njengesivikelo ngokumelene nezidwebo nezinambuzane. Futhi, isambulela esikhulu (i-dopho elihle) lavikela inkosi emoyeni nasemvula.
Namuhla, asikho isidingo sokuba abantu banamuhla bavikele induduzo yokulala kusukela ezimweni zezulu nezesimo sezulu. Kodwa-ke, umbhede we-canopy usasebenza, nakuba usetshenziswa ngokuyinhloko ngezinhloso zokuhlobisa. Angitholakali kuphela eVersailles noma kunoma iyiphi enye indawo, kodwa nasezindlini zanamuhla nezindlu. Ngesizo salesi sici esiyingqayizivele, ungakha isimo semvelo ekamelweni, okufunwa hhayi kuphela ngabantu abalulekile, kodwa nabantu abavamile.
Ngaphambilini, i-baldachin yenziwe ngezindwangu ezinomsoco nezindayo, okhethwayo manje kunikelwa indaba elula nokugeleza. Ekudalweni kwayo, amakhosi awayekeli noma yiziphi izindwangu ezibizayo ezinomnsalo nezembatho, noma ukugcoba okuningi. Unyaka ngamunye kuba mnandi futhi omuhle kakhulu, uthola izinhlobo eziningi zanamuhla.
Akuwona wonke umninikhaya ongaziqhayisa umbhede amane, kodwa akunakwenzeka ukuphikisana neqiniso lokuthi kungakha isimo esithile ngaphakathi. Imibhede enjalo ifenisha salons noma emakhasini wezinhlu zizibheka, kodwa ngokuqhubekayo leli bhizinisi, njengombuso, alihambanga. Futhi kuyize. Phela, lo mbhede ubukeka ubiza, uhlelekile futhi unomusa hhayi kuphela emagcekeni omagazini abakhiqizi abakhulu, kodwa nasemagumbini avamile.
Ngokuvamile ama-cots ane-canopy athengwa emakamelweni abantwana. Kulokhu, badlala indima hhayi ukuhlobisa kuphela, kodwa futhi banomsebenzi osebenzayo. Namuhla umcibisholo we-crib ube yinto yokubaluleka ebalulekile, ngoba ikhuthaza ubuthongo obunempilo wengane, iwuvikela ekushicileleni, uthuli, izinambuzane, ukukhanya kwesibani nemisebe yelanga. Ngayo yonke lezinzuzo ezingenakuphika, umcibisholo ubheka okumangalisayo futhi obizayo, ukuhlobisa i-nursery, ukuguqula umbhede ube umbhede wasezulwini.
Ngaphambili, umbhede wokugcoba wawuyisakhiwo esikhulu, manje sashintshwa saba yi-canopies elula. Ngokuphelele kunezinhlobo eziningana zamathambo ezinjalo, ezivumelanisa nalokhu noma isitayela futhi zihlala impilo egcwele kunoma iyiphi ingaphakathi.
Enye yezinketho ezithandwa kakhulu - umbhede ngezikhala ezine, noma, isibonelo, umbhede ojikelezayo. Yilezi zakhiwo ngokuvamile ezifuna ukubona emakhaya abo izakhamuzi zakamuva zamadolobha.
Kodwa kungakhathaliseki ukuthi uluphi uhlobo lwebhedi olukhethile nge-canopy, qiniseka ukuthi igumbi lakho lokulala lizogcwaliswa ngefenisha engcono kakhulu. I-Baldahin izokwazi ukungena kunoma yikuphi ukungaphakathi futhi ulethe isikhangiso esithile ekamelweni, okungeke kwaziswe wena noma izivakashi zakho.
I-Vileika ifenisha yenkampani: incazelo yenkampani, ama-assortment kanye namanani
Indlela ukupheka namanzi salmon pink kuhhavini: isinyathelo ngesinyathelo iresiphi
Kungani ikhabe - berry nokuthi lokhu kuyiqiniso?
MRI yomgogodla wesibeletho: izinkomba kanye informativeness
Yini okufanele ibe isimo madoda zokuxhumana nabantu